Sary mampiady hevitra sy viralin'ny 11 izay lasa montage | Famoronana an-tserasera
Sary mampiady hevitra sy viralin'ny 11 izay lasa montage
Fran Marin | | mpanakanto, sary
Tsy vao voalohany amin'ny Internet izany tsy takatry ny saina ny zava-misy, sary mampiady hevitra dia miseho tsy misy fifanoheran-kevitra ary lasa viral. Tsy vao sambany no nanaovana fampielezan-kevitra an'ity karazana ity mba hahazoana laza na hisarihana ny sain'ny besinimaro. Izany no antony maha-zava-dehibe ny famelantsika ny tenantsika ho mariky ny fisalasalana manoloana ireo vaovao tonga amintsika, satria afaka mamorona hevi-diso sy finoana diso isika noho ny lesoka tsy nahy, na ny ratsy indrindra, noho ny fanentanana fanahy iniana.
Avelako eto ianao Ohatra 11 amin'ny sary sandoka ary nahatratra ny voninahitra izy ireo tamin'ny alàlan'ny fiovan'ny zava-misy.
Sary namboarina nalaina tamin'ny fotoana namonoana an'i Kennedy
Raha ny marina, ity dia iray amin'ireo sary mitokona amin'ny voalohany, saingy mampitandrina antsika ny fahaiza-misaina fa hadalana izany satria ... iza no mety ho akaiky ny hetsika naka ity sary ity? Raha misintona ny arisiva isika dia hitantsika fa sary iray avy amin'ilay sarimihetsika malaza The Trial Of Lee Harvey Oswald tamin'ny 1977.
Ireo rahona manaitra eo ambonin'ny tendrombohitra Fuji malaza
Tena misy io karazana rahona io, tsy hafahafa ny fahitana azy ireo, raha ny marina, mihoatra ny indray mandeha izy ireo no diso hevitra fa saucers manidina. Amin'ity tranga ity dia ampy ny mijery tsara ny sary vao mahatsapa fa nisy olona nanao kopia sy nampita tamin'ny alàlan'ny programa fanovana nomerika vondrona rahona lenticular eto amin'ny tendrombohitra misy antsika.
Famaritana ny hatsarana manodidina ny taona 1955 tao amin'ny magazine Time
Mazava ho azy, maodely iray izay mety latsaka ao anatin'ny kanôna misy ny hatsaran-tarehy izy, saingy na izany aza ity sary ity dia tsy fifanarahana amin'ny fomba fahazoana ny hatsarana ary indrindra amin'ny fikarakarana vaovao amin'ny folo taona 50 satria tamin'io fotoana io dia mety ho ity sary ity efa raharaha ratsy teo imasom-bahoaka. Raha ny marina ity sary ity dia kinova monochrome an'ny sarin'i Aria Giovanni, kintan'ny pôrnôgrafia ary natao tamin'ny taona 2004 tany ho any.
Fiaramanidina Chemtrails ao anatiny?
Hadisoana. Nanjary viriosy tao amin'ny Internet ity sary ity ary saika fanamafisana ny fiokoana tsikombakomba fa misy fiaramanidina manary chemtrails miaraka amin'ny tanjona hanapoizinana ny mponina. Na izany aza, tsy misy zavatra mety ho lavitra ny zava-misy (farafaharatsiny amin'ity sary ity, mety tena hafa ny zava-misy). Ny hitantsika eto dia ny atin'ny fiaramanidina fitsapana feno fonosana feno barika feno rano hanamboarana ny lanjan'ny mpandeha.
Saripika mangatsiatsiaka zaza Syriana matory eo amin'ny fasan'ny ray aman-dreniny maty
Nivezivezy be dia be tamin'ny Internet izy io ary ho an'ny maro dia io no tandindon'ny dikan'ny krizy Syriana. Na izany aza, ny tena zava-misy dia ity sary ity dia ao anatin'ny tetikasa fakana sary an'ny mpanakanto Saodiana Abdul Aziz al-Otaibi, raha ny marina dia napetraka voalamina tsara sy voaravaka izy io.
Nisy doka fanavakavaham-bolon-koditra niseho tamin'ny rakipeo tany amin'ny magazain'i McDonald
Ity doka ity dia nanome betsaka resaka momba ny fomba fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny mpanjifa mazava tsara ary voalaza fa ny mpanjifa afrikanina afrikanina dia tsy maintsy mandoa $ 1.5 isaky ny fividianana noho ny andiana halatra tato ho ato. Raha ny marina, ity fanamarihana ity dia noforonin'olona te hanao ankivy ny orinasa.
Sigara Marijuana noforonin'ny orinasa Marlboro?
Diso tanteraka ity sary ity, na dia mihoatra ny iray aza no maniry izany. Na dia realistika aza ny montage dia mbola montage ihany.
Ity ny fivoaran'ny fandotoana nokleary vokatry ny loza tao Fukushima
Betsaka ny olona no nino fa ity sarin'ny NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ity dia nampiseho taratra avy amin'ny fipoahana nokleary Fukushima tamin'ny taona 2011 nanerana ny ranomasina, raha ny tena izy dia manara-maso ny onja sy onja izy io.
Sarin-dokambarotra momba ny dokam-barotra ho an'ny mpifindra monina any Etazonia izay milaza hoe: Tandremo ny mpifindra monina tsy ara-dalàna, tsy tongasoa ianao any Arizona, fa faly i Los Angeles mandray anao.
“Trano maimaimpoana, fampianarana maimaimpoana, sakafo maimaim-poana, fanafody maimaim-poana ary hopitaly maimaimpoana. Tsy misy sarany na haba fanampiny, ary misy asa na aiza na aiza. " Taorian'ny fampiharana ny fepetra hanamafisana ny fifehezana ny fivezivezena mpifindra monina ao amin'ny fanjakan'i Arizona ary naneho hevitra ny manampahefana any Los Angeles fa mihevitra izy ireo fa diso izy ireo, niseho tamin'ny tambajotra sosialy ity montage ity.
Sarin'ny varatra lava mahavariana mahavoa hazo
Raha araka ny zava-misy sy tsara tarehy dia toa namboarina io sary io. Na dia marina aza fa maro ny tselatra helatra hita toy izao rehefa mianjera izy ireo, ity dia ampahany amin'ny tetikasan'ny artista Darren Pearson.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary mampiady hevitra sy viralin'ny 11 izay lasa montage
'Level UP' avy amin'i DeadSlug ary ny talen'ny farany alohan'ny "noobs" kely roa
Emma Cook sy ny abidia mpamolavola azy: Ny fototra A-Z